Tsy tsotra toy ny tsinaim-balala ny lahateny Rosiana momba ny ady ao Okraina · Global Voices teny Malagasy
Nohazonina izay manohitra ny fitantaran'i Kremlin amin'ny fananiham-bohitra an'i Okraina
Voadika ny 27 Febroary 2022 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Español, русский, srpski, Ελληνικά, Nederlands, українська, English
Pikantsary avy amin'ny Novaya Gazeta fantsona YouTube ahitana ireo Rosiana mpanohitra ny fananiham-bohitra Rosiana an'i Okraina, anisan'izany i Dmitri Muratov, ilay nahazo ny loka Nobel ho an'ny fandriampahalemana 2021,
Tamin'ny 24 Febroary, nanafika sy nidaroka baomba ny fotodrafitrasa miaramila manerana an'i Okraina ny tafika Rosiana ka avy amin'izany izy manomboka nanafika ny mpifanolobodirindrina aminy.
Heverina ho manjakazaka sy maneho ny lahateny Rosiana ny feon'ny filoha Rosiana Vladimir Putin. Saingy midika ny fampielezan-kevitra mielipatrana, ny fitandremana amin'ny fifampizaràna hevitra ampahibemaso na ny famaliana ireo mpanao fitsapan-kevitra, ary ny tsy fahatokisana ny fanjakana fa sarotra ny manao fanambarana voafaritra tsara momba ny tena fomba fijerin'ny olom-pirenena Rosiana. Na dia tsy hita ao amin'ny haino aman-jery Rosiana aza, dia misy porofo fa samy manana ny heviny sy somary matsora kokoa noho izay tadiavin'i Putin hinoan'izao tontolo izao azy ny fomba fijerin'ny Rosiana sasany momba ny fanafihan’i Rosia ara-tafika.
Nanambara ny fomba fijeriny sy ny fandikany manokana ny fifandraisana Rosiana-Okrainiana nandritra ny taonjato 13 lasa i Putin, nalefa tao amin'ny lahatsary tamin'ny 21 Febroary. Nohazavainy mazava ihany koa fa tsy mahazo mandà ny fomba fijeriny na dia amin'ny antsipiriany kely indrindra aza ny manodidina azy, anisan'izany ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitry ny Fiarovana Rosiana.
Tsy hita anefa hoe hatraiza ny fahamarinany, raha araka ny namaranany ny lahateniny hoe:
Resy lahatra amin'ny fanohanan'ny olom-pirenena Rosiana sy ny hery tia tanindrazana rehetra.
Zava-dehibe ny mahalala fa voasivana sy araha-maso akaiky amin'izao fotoana izao ao Rosia ny habaka ho an'ny daholobe sy ny fampitam-baovao. Mampihatra ny sazy henjana amin'ny fanehoana fanakianana ampahibemaso ny lalàna Rosiana, ao anatin'izany ny media sosialy. Heloka bevava ihany koa ny filazana ampahibemaso fa tsy anisan'ny Federasiona Rosiana i Krimea.
Misy fitsipika vaovao amin'izao fotoana izao napetraka hanamafisana izany fanaraha-maso izany, anisan'izany ny tsy hitateran’ny mpanao gazety Rosiana afa-tsy ny loharanom-baovao ofisialy nomen'ny governemanta Rosiana ihany. Vao namoaka ny antsipirihan'izany baiko izany ny Roskomnadzor, andry Rosiana manara-maso ny fampitam-baovao sy ny aterineto.
Ary misy angondrakitra momba ny tsy fitovian-kevitry ny mponina Rosiana amin'ny filazan'i Putin. Na dia eo aza ny tena loza mitatao amin’ny fihazonana tsy fitovizan-kevitra, dia nanambara ny fitsapan-kevitra vao haingana nataon'ny Foibe Levada fa manohitra na tsy manaiky ny fanapahakevitr'i Putin momba an'i Okraina ny ampahatelon'ny Rosiana.
Misy antony maromaro manazava ny antony efa nanoherana ny safidy fanafihana ara-miaramila rehetra. Olona maro any Rosia no manana fiaviana Okrainiana, fianakaviana akaiky any Okraina, lehibe na nianatra tany Okraina. Maro koa no mahatsiaro ny fahafatesan'ny miaramila sovietika vokatry ny Fanafihan'ny Sovietika an'i Afganistana tamin'ny taona 1979 ka hatramin'ny 1989, izay nahafatesana miaramila sovietika miisa 15.000, ary maro hafa no naratra ara-tsaina sy ara-batana.
Tamin'ny 24 Febroary, andro voalohany tamin'ny fanafihana ara-tafika nataon'i Rosia an'i Okraina, manam-pahaizana maromaro no nanao sonia fanangon-tsonia manohitra ny ady. Koa satria voafehy sy voasivana amin'ny ampahany ny fidirana amin’ny aterineto, dia tapaka hatrany ny rohy, ka ny indro omena eto ambany ny pikantsary:
Toy izao indrindra ny voalazan’ny lahatsoratra: “Izahay, mpahay siansa Rosiana sy mpanao gazety ara-tsiansa, dia manambara fa manohitra tanteraka ny hetsika ara-miaramila natomboky ny tafika mitam-piadiana ao amin'ny firenentsika ao Okraina.”
Ary ity misy lisitra izay tsy mitsaha-mitombo amin'ireo ny sasany nanao sonia izany, ahitana ny sehatra samihafa amin'ny zavakanto ho an'ny daholobe, ny lafiny ara-tsiansa ary ny fiainana akademika:
Naneho ny fanoherany ny ady ihany koa ireo Rosiana mpanao seho sy olo-malaza ara-panatanjahantena sasany, anisan'izany ireo heverina ho akaiky an'i Kremlin:
Efa nahangona sonia maherin'ny 250.000 ny fanangonan-tsonia amin'ny teny Rosiana ao amin'ny tranokalan'ny fisoloana vava Change.org, amin'ny teny Rosiana ny ankamaroany, maneho ny fandàvany tanteraka ny ady.
Mitatitra ny fampitam-baovao tsy miankina amin'ny teny Rosiana Meduza, ao Letonia, fa notanana am-ponja ireo olona manao fihetsiketsehana ampahibemaso manerana an'i Rosia manohitra ny ady amin'i Okraina, matetika amin'ny olon-tokana na vondrona kely.
Mety hiitatra amin'ny andro hoavy ny elanelana misy eo amin'ny lahatenin'ny Kremlin amin'izao fotoana izao rehefa miverina an-tanindrazana ireo vatam-paty voalohany miaraka amin'ny miaramila Rosiana.